Imaammata Twitter amala jibbaa irratti | Gargaarsa Twitter
Imaammata amala jibbaa
Amala jibbaa: Isin sanyii, gosa, biyyaa dhalootaa, sadarkaa, saala walqunnamtiidhaf filatan, saalaa, eenyummaa saalaa, amantii hordofan, umurii, hir'ina qaamaa, yookan dhibee hamaa irratti hundaa'udhaan namoota biroo irratti miidhaan akka gahu kakaasuu ykn kallattiidhan miidhuu yookan sodaachisuu hin dandeessan. Nutis eenyummeessitoota kaayyoon jalqabaa isaanii ramaddiiwwan kanneen irratti hundaa'udhaan namoota biroo irratti miidhan akka gahu kakaasuu ta’e hin eeyyamnu.
Suurawwan jibbiinsaa fi maqaawwan agarsiisaa: Suurawwan ykn mallattoolee jibbiinsaa suuraa piroofaayilii keessan ykn mata-duree piroofaayilii keessan keessatti fayyadamuu hin dandeessan. Akkasumas amala hacuuccaa kan akka hacuuccaa xiyyeeffame ykn nama tokko, garee ykn ramaddii eegumsa qabu irratti jibba ibsuu ta'e keessatti hirmaachuf, maqaa fayyadamaa, maqaa agarsiisaa ykn seenaa piroofaayilii keessan fayyadamuu hin dandeessan.
Ergamni Twitter, namoonni hundi yaadotaa fi odeeffannoo akka uumanii fi qoodan, akkasumas ilaalchotaa fi amantaawwan isaanii daangaawwan malee akka ibsataniif aangoo kennuu dha. Bilisaan of ibsuun mirga namummaati – namni hundi sagalee akka qabuu fi itti fayyadamuudhaf mirga akka qaban amanna. Gaheen keenya haasaa uummataa, kan bakka bu'ummaa ilaalchota garaa garaa barbaadu tajaajiluu dha.
Namoonni yoo Twitter irratti miidhan isaan mudate, dandeettii isaan ittiin of ibsan akka miidhu ni hubanna. Qorannoon akka agarsiisutti, gareewwan namoota tokko tokko haala madaalawaa hin taanen sarara interneetii irratti miidhan isaan irratti xiyyeeffatama. Kunis kan hammatu; dubartoota, namoota adii hin taane, lesbiyaan, geey, baayseekshuwaal, tiraansjeender, qu'eer, interseeks, namoota asseekshuwaal ta'an, hawaasota dhiibbamanii fi seenandhaan bakka bu'iinsa gahaa hin qabneedha. Isaan gareewwan bakka bu'iinsa gahaa hin qabne hedduudhan of ibsaniif, miidhan caalaatti kan baratame, haalan baay'ee kan cimee fi caalatti miidhaa kan geessisu ta'uu mala.
Nuti miidhaa jibbiinsa, akkasumaan jibbuu ykn wal danda'uu dhabuu irraa ka'an, keessumattuu miidhaa sagaleewwan warreen seenadhaan dhiibbaman callisiisuu barbaadu dhaabsisuuf kutannoo qabna. Sababa kanaaf, amala miidhaa bu'uura miseensummaa ramaddii eegumsa qabuutin namoota yookan gareewwan irratti xiyyeefatu ni dhorkina.
Yoo wanta imaammata amala jibbaa keenya cabsa jettanii yaaddan Twitter irratti agartan, maaloo nutti gabaasaa.
Yeroo kuni hojiirra ooluu
Gabaasota eenyummeessitoota namootaa yookan garee namootaa irratti Tiwiitota ta'e Ergaawwan Kallattii keessatti amaloota armaan gadiitin irratti xiyyeeffatan qorannee tarkaanfii ni fudhanna.
Doorsisawwan hamoo ta'an
Qabiyyee qaama addaan bahee beekamuu danda'u irratti doorsisawwan hamoo geessisu ni dhorkina. Doorsisoonni hamoon himoota ibsa fedhii miidhamoota geessisuu kan miidhama qaamaa hamaa fi yeroo dheeraa turu geessisu, kan namni tokko itti du'uu ykn garmalee itti miidhamu, fkn. "Ani sin ajjeesa" jedhanii dha.
Hubachiisa: nuti doorsisoota hamoo ta'an irratti imaammata obsa hooma hin qabne qabna. Warreen doorsisoota hamoo qoodan jedhaman eenyummeessan isaanii battalumattii fi dhaabbidhaan akka ittifaman ta'u.
Miidhan hamaan nama tokko irratti ykn garee namootaa irratti akka gahu fedhuu, hawwuu ykn kakaasuu
Qabiyyee ramaddii eegumsa qabu guutuu fi/ykn namoota miseensota ramaddii sanaa ta'uu malan irratti du'a, miidhaa qaamaa cimaa, ykn dhibee hamaa fedhu, hawwu, jajjabeessu, kakaasu ykn ibsu ni dhorkina. Kunis kanneen armaan gadii hammata, garuu kanneenin hin daangeffamu:
Garee eegumsa qabu guutuu fi/yookan namoota miseensota garee sanaa ta'uu malan dhibee hamaadhan akka du'an hawwuu, fkf., “Ani [sabni] hundi COVID dhan qabamanii akka du'an hawwa.”
Namni tokko balaa hamaadhaf akka saaxilamu hawwuu, fkf., “Yeroo itti aanu afaan kee bannaan konkolaatadhaan akka ati dhahamtun hawwa.”
Gareen namootaa tokkoof miidhaa qaamaa hamaatu isaanif mala jechuu, fkn., “Yoo gareen [arrabsoo] afaan qabachuu baate, rasaasan dhahamuu qabu.”
Miseensummaa isaanii ramaddii eegumsa qabu tokkoo irratti hundaa'udhaan, namoonni biroo miidhaa nama tokko ykn garee tokko irraan akka gahan jajjabeessuu fkn., “Ani [arrabsoo sabaa] aboottidhaan rukutuufani, eenyutu na faana jira?”
Bakka gareewwan eegumsa qaban irratti adda-dureedhan xiyyeeffachuun, ajjeechaa jumlaa, taatewwan hamoo ta'an, ykn karaawwan jeequmsaa murtaa'oo ta'an caqasuu
Qabiyyee ramaddiiwwan eegumsa qaban irratti adda-dureedhan xiyyeeffachuun, ajjeechaa jumlaa, taatewwan hamoo ta'an, yookan karaawwan jeequmsaa murtaa'oo ta'an caqasuun namoota yookan gareewwan irratti xiyyeeffachuu ni dhorkina. Kunis miidiyaa ykn barreeffama kanneen armaan gadii agarsiisu ykn ibsu hammata, garuu kanaan hin daangeffamu:
Balleessaa sanyii, (fkn, Hoolookaastii);
Daboodhan nama ajjeesuu.
Ramaddiiwwan eegumsa qaban irratti kakaasuu
Amala namoota ykn garee namoota miseensota ramaddiiwwan eegumsa qabanii ta'an irratti kakaasu ni dhorkina. Kuni kan hammatu qabiyyee:
Sodaa kakaasuf ykn miseensonni ramaddii eegumsa qabu tokkoo gochaalee hamoo ykn seeran alaa irratti carraan hirmaachuu isaanii guddaa ta'uu cimsanii dubbachuu dabalatee, waa'ee ramaddii eegumsa qabuu tokko yaadota dogongoraa sodaachisoo ta'an faffacaasuuf yaadame, fkn., “[garee amantaa] hundi shororkeessitoota.”
Namoonni biroo miseensota ramaddii eegumsa qabu tokkoo hujeffannoo irratti ykn hujeffannoo alatti akka hacuucan kakaasuf yaadame., “Ani [garee amantaa] kuni nu caalla jedhanii yaaduu isaanii nuffe, yoo nama [mallattoo amantaa garee amantaa] uffate agartan, irraa mulqaatii suuraa maxxansaa!“
Sababa namni tokko ykn gareen tokko miseensa ramaddii eegumsa qabu tokooti jedhamee yaadameef, namoonni biroo bifa dhaabbata diinagdee isaatif deeggarsa gochuu dhiisutiin akka loogii irratti godhan kakaasuf yaadame fkn, “Yoo isin suuqii [garee amantaa] dhaqxan, isin [arrabsoo] sanneen deeggaraa jirtu, maallaqa keenya [arrabsoo amantaa] sanneenif kennuu haa dhaabnu." Kuni qabiyyee uumamaan siyaasaf yaadaman, kanneen akka ibsa siyaasaa ykn qabiyyee qoqqoobbiwwan ykn mormiiwwaniin walqabatan dabalachuu dhiisuu mala.
Qabiyyeen miidhaa ramaddii eegumsa qabu tokko irratti kakaasuf yaadame, bu'uura Miidhan hamaan nama tokko irratti ykn garee namootaa irratti akka gahu fedhuu, hawwuu ykn kakaasuutin dhorkamaa ta’uu isaa hubbadhaa.
Qabiyyee sodaa kakaasuf ykn miseensonni ramaddii eegumsa qabu tokkoo gochaalee hamoo fi seeran alaa irratti carraan hirmaachuu isaanii guddaa ta'uu cimsanii dubbachuu dabalatee, waa'ee ramaddii eegumsa qabuu tokko yaadota dogongoraa sodaachisoo ta'an faffacaasuuf yaadameen namootaa fi gareewwan irratti xiyyeeffachuu ni dhorkina fkn “[garee amantaa] hundi shororkeessitoota.”
Arrabsoowwan irra deddeebi'uu fi/ykn fedhii irratti hin hundoofne, ibsoonni mooggasaa, sanyummaa fi saalummaa ykn qabiyyee biraa nama tokko xiqqeessu
Arrabsoowwan irra deddeebi'amaniin, ibsoota moggaasaa ykn qabiyyee biroo nama xiqqeessun, gadi-buusun ykn yaadota hin barbaachifne ykn dogongoraa waa'ee ramaddii eegumsa qabu tokkootin namoota biroo irratti xiyyeeffachuu ni dhorkina. Kuni namoota tiraansjeendarii ta'an saala dogongoraatin waamuu ykn maqaa duraatin waamuu dabalata. Akkasumas garee namootaa amantaa, sadarkaa, umurii, hir'ina qaamaa, dhibee hamaa, biyya dhalootaa, sanyii, ykn gosa isaanii irratti hundaa'un xiqqeessuu ni dhorkina. Haalota kaayyon jalqabaa namoota biroo hacuucuu ykn sodaachisuu ta'e keessatti, kanneen akka (garuu kanneenin hin daangeffamu) arrabsoo, maqaalee moggaasaa ykn fakkiiwwan sanyummaa/saalummaa hamaa, irra deddeebiidhaan fayyadamuu tokko tokko keessatti, Tweet haquun nurra jiraachuu mala. Haalota biroo kaayyon jalqabaa namoota biroo hacuucuu ykn sodaachisuu itti ta'e, kanneen akka (garuu kanneenin hin daangeffamu) itti fayyadamni giddugaleessaa, foo'amaa ta'e keessatti, akkaataa armaan gaditti caalaatti ibsametti Tweet'n akka hin mul'anne daangeessuu malla.
Fakkiiwwan jibbiinsaa aasxaawwan, mallattoowwan ykn fakkiiwwan kaayyon isaa namoota biroo irratti sanyii, amantaa, hir'ina qaamaa, saala walqunnamtii saalatiif filatanii, eenyummaa saalaa ykn gosaan/biyya dhalootaa isaanitiin jibbiinsaa fi hammeenya jajjabeessu akka ta'an ni hubanna. Fakkeenyonni muraasni fakkiiwwan jibbiinsaa kanneen armaan gadii hammatu, garuu kanneenin hin daangeffaman:
Mallattoolee seenadhaan garee jibbiinsaa wajjiin hidhata qaban, fkn., Nazi swastika;
Fakkiiwwan namoonni biroo akka namaa gadi ta'anitti agarsiisan, ykn mallattoolee jibbiinsaa dabalachuuf jijjiirraman, fkn., suuraa namootaa amala bineensaa itti dabaluuf jijjiiruu; ykn
Fakkiiwwan mallattoolee jibbiinsaa dabalachuuf ykn ajjeechaa jumlaa ramaddii eegumsa qabu tokkoo agarsiisuf jijjiirraman, fkn, Hoolookaastii agarsiisuf, aasxaa Urjii Keelloo Daawit itti dabaluuf suurawwan namootaa jijjiiruu.
Miidiyaan fakkiiwwan jibbiinsaa agarsiisu viidiyoo kallattii keessatti, seenaa eenyummeessa, piroofaayilii ykn suurawwan mata-duree irratti hin eeyyamamu. Haalonni biroo hundi akka miidiyaa of-eeggannoo barbaadanitti kaa'amuu qabu. Dabalataan, fakkiiwwan jibbaa barbaachisoo hin taane nama tokkotti erguun imaammata amala miidhaa geessisuu keenya cabsuudha.
Qabiyyeen kuni Danbiiwwan Twitter cabsuudhaf ani xiyyeeffannoo isaa ta'uun qabaa?
Tiwiitonni tokko tokko yeroo addatti ilaalaman kan jibbiinsaa fakkaachuu malu, garuu haala haasawa waliigalaa keessatti yommuu ilaalaman ta'uu dhiisuu malu. Fakkeenyaf, miseensonni ramaddii eegumsa qabu tokkoo jechoota akka arrabsootti fudhatamaniin wal waamuu malu. Yeroo waliigaltee keessatti fayyadaman, yaadni duuba jechoota kanneenii miidhaa kan geessisan miti, garuu karaa jechoota seenadhaan namoota xiqqeessuf faayidaa irra oolaa turan ittiin deebisaniidha.
Yeroo qabiyyee akkanaa madaallu, haala isaanii eegumsa qabu irratti hundaa'udhaan nama tokko irraan miidhaa geessisuuf kan yaadame ykn qaamaa haasawa waligaltee ta'uun isaa ifa ta'uu dhiisuu mala. Gareen keenya qabiyyicha akka hubatuuf, tarkaanfii fudhachuu keenyan dura odeeffannoo barbaachisu argachuu keenya mirkaneessuf, yeroo tokko tokko nama kallattiidhan xiyyeeffannoon irratti godhame irraa dhagahuu nu barbaachisa.
Hubachiisa: nuti tarkaanfii akka fudhannu namoonni miseensa garee eegumsa qabu tokkoo ta'uun irra hin jiraatu. Namoonni miseensummaa garee eegumsa qabu kamiyyuu ta'uu yookan ta'uu dhiisuu isaanii akka mirkaneessan gonkumaa hin gaafannu akkasumas odeeffannoo kana hin qorannu.
Imaammata kana jalatti, amala namoota ykn ramaddii eegumsa qabu guutuu amala jibbaatiin, akka armaan olitti ibsametti irratti xiyyeeffatu irratti tarkaanfii fudhanna. Irratti xiyyeeffachuun karaa hedduudhan ta'uu danda'a, fakkeenyaf, suuraa nama tokkoo, nama tokko maqaa guutudhaan waamuu, kkf. dabalatee maqaa waamuu.
Yeroo adabbii imaammata kana cabsuu murteessinu, ulfaatina imaammatichaa cabsuu fi galmee danbii cabsuu duraanii nama tokkoo dabalatee wantoota hedduu ilaalla, garuu kanneenin hin daangeffamnu. Kan armaan gadii qabiyyee imaammatichaa kana cabsaniif tarreeffama filannoowwan tarkaanfii ta'uu malaniiti:
Yeroo fayyadamaan barreessaa Tiwiitichaa kan hordofu ta'e malee, deebiwwan keessatti sadarkaa Tiwiitota gadi buusuu.
Fayyadamtoota barreessaa Tiwiitichaa hin hordofneef, Tiwiitonni bu'aawwan barbaachaa Olaanoo keessatti fi/ykn sarara yeroowwanii irratti agarsiifamuuf gahumsa akka hin qabaanne gochuu
Tiwiitotaa fi/ykn eenyummeessaa iimeelii ykn oomishoota keessaa akka yaadotaatti dhiheessuu dhiisuu.
Tiwiitin akka haqamu gaafachuu.
Fakkeenyaf, namni tokko qabiyyee imaammata cabsuu akka haqu ni gaafanna akkasumas lammata tiwiitii gochuu danda’uun dura yeroo ta'eef haalata dubbisuu qofa irra kka turan goona. Irra deddeebidhaan cabsuun, yeroo dheeradhaaf dubbisuu qofa akka danda'an akkasumas dhuma irratti guutumaan guututti akka dhorkaman taasisa.
Eenyummeessitoonni faayidaan jalqabaa isaanii akkaataa imaammata kana keessatti ibsameen amala jibbaa keessatti hirmaachuu akka ta'e addaan baasne, ykn doorsisoota hamaa ta'a qoodan dhorkuu.
Waa'ee Hamma filannoowwan tarkaanfii keenyaa caalaatti hubadhaa.
Yoo namni tokko eenyummeessan isaa dogongoraan akka dhorkame amane oliyyannoo galfachuu danda'a.